झारफूक गर्छु भन्दै ३० वर्षकी महिलाको कोठामा मध्यरातमा गएर…. – Classic Khabar
झारफुक गर्ने बहानामा महिलालाई कर णी गर्ने एक जना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तानसेन–३, भगवती टोलमा बसेर झारफुक गर्ने तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं। १० खैरेनीका ३२ वर्षिय केदार रनपाललाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।
Prevदशैँमा जिउदो मान्छेको मा’सु का’टेर चढाउनै पर्ने नेपालको यो मन्दिर, कसरी ल्याइन्छ मासु !
Nextयिनी हुन् ४ जनाको मृत्यु भएको मोतिपुर घटनाका मुख्य योजनाकार